पृथ्वी सृष्टि गरिनुको कुनै उद्देश्य छ? | बाइबल प्रश्नहरूको जवाफ
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको ईवी उज्बेक उन्डुबेली उम्बुन्डु एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डाँग्मे डेनिश त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली न्यानेका पंगासिनन् पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्गोलियन माया मालागासी माल्टिज मूर म्यासडोनियन युक्रेनियन योरूबा रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिब्रू हिलिगेनोन
मानिसहरू हाँसिखुसीले जीवन बिताऊन्‌ भनेर पृथ्वी बनाइएको हो
पृथ्वीमा जीवन जिउनलाई चाहिने सबै कुरा छ। यहाँ जीवनको लागि नभई नहुने पानी प्रशस्त छ। पृथ्वीले सूर्य परिक्रमा गर्ने बाटो, पृथ्वीको ढल्काइ र घुमाइ एकदमै सही भएकोले महासागरको पानी जम्न वा उम्लन पाउँदैन। पृथ्वीको वायुमण्डल र चुम्बकीय शक्तिले पृथ्वीलाई हानिकारक विकिरणहरूबाट जोगाउँछ। बोटबिरुवा र जीवजन्तुबीचको आपसी निर्भरता पनि अचम्मलाग्दो छ। त्यसैले थुप्रै मानिस पृथ्वी कुनै उद्देश्यसहित सृष्टि गरिएको हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन्‌।—यशैया ४५:१८ पढ्नुहोस्।
तर तपाईंलाई लाग्ला: के दुःखकष्ट र अन्याय पनि त्यही उद्देश्यको भाग हो?—व्यवस्था ३२:४, ५ पढ्नुहोस्।
के पृथ्वीको उद्देश्य पूरा हुनेछ?
एकअर्कालाई आदर गर्ने र सृष्टिकर्तालाई प्रेम गर्ने मानिसहरू हाँसिखुसीले जीवन बिताऊन्‌ भनेर पृथ्वी बनाइएको हो। त्यसैले मानिसलाई बोटबिरुवा वा जीवजन्तुलाई भन्दा फरक उद्देश्यसहित सृष्टि गरिएको हो। हामीसित सृष्टिकर्तालाई चिन्ने, उहाँको आदर गर्ने र उहाँको प्रेम अनि न्याय अनुकरण गर्ने क्षमता छ।—उपदेशक १२:१३; मीका ६:८ पढ्नुहोस्।
हाम्रो सृष्टिकर्ताले आफ्नो जुनसुकै उद्देश्य पनि पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँले दुःखकष्ट र अन्याय हटाएर पृथ्वीलाई सुन्दर घरजस्तै बनाउनुहुनेछ भनेर हामी ढुक्क हुन सक्छौं।—भजन ३७:११, २९; यशैया ५५:११ पढ्नुहोस्।
के परमेश्वर हुनुहुन्छ?